Semalt Expert Anotsanangura Sei SEO Zvaidiwa Kuve Nhengo Yakakwana Yekambani Yako
Tsvaga Engine Optimization (SEO) haigoni kuitwa kamwe chete kuti ibudirire.Nokuda kwekuchengetedza, SEO inoda kubatanidzwa mumigadziro yekutanga yekutarisa yako e-business venture.
Imakore gumi nehafu yapfuura, sangano reSeO rinogona kuwedzera hupenyu hwekutsvagakunyaradzwa kwekamuri yake. Aizoyeuchidza mazwi anonyanya kukosha muchikopi mushure mekunge atova pamapepa, aite pepa, uyezve,ita zvigaro pamusoro wikis, zvinyorwa zvenyaya, uye mabhuku ehu blog.
SEO ichiri kusanganisira kubatanidza hutungamiri uye nheyo yezvinyorwa - tonirana krema avene cleanance. Zvisinei, ikozvino, iyokunyanya kugadzirwa kwezvinhu zvakakosha kunofanirwa kujekeswa maererano nesangano renzvimbo; mune zvigadzirwa zvavarizvakapiwa; nzira iyo yavanonzi nayo. Ichi ndicho chikonzero nei ichifanira kuvakwa mukati mekushanda kwekuita kwako digital.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt ,inopa kunzwisisa kuti nei SEO inoda kubatanidzwa muchikamu chekambani yako, uye kuti iwe unofanirwa sei kutungamira e-business venture.
Nhasi SEO Iro Nezvokuita
Kutaura zvazviri, SEO nyanzvi ndeyomutoro wekutengesa zvishoma. SEO inodarakanyatsotsanangurwa kutsvakurudza mashoko pamusoro pechikonzero chepamusoro chekujekesa pamusoro pesaroni uye nzira. Tinofanira kuongorora nzvimbo yacho nguva yakawanda kuti tive nechokwadikuti inopindirana nemazano ekugadzirisa. Zviripo zvinoda kugadziriswa uye metadata yakanyorerwa zvitsva.
Kukurudzira Dzimwe Miti
Inonyanya kukosha SEO inopihwa mazano kune zvakawanda zvezvirongwa zvakadai sokubvisakunze kwemashoko zvakagadzirwa nekugadzirisa kondinendi itsva yekondinendi.
Semuenzaniso, mutengi akandibvunza kuti nei kushanda kwechikamu chekufambisa chikavekwete maererano nechitarisiko. Kuongororwa kwebvunzo iri mubvunzo kwakaratidza kuti kusavapo kwevashandi vekufamba kwevashandi kune injini yekutsvaga.Kunyanya, pakange pasina mukana wekutsvaga injini ku skulk kune nzira iyo mutengi aitarisira kuenzanisa.
Kugadzirisa zvose izvi zvinobatsira mapepa okumanikidzira kushandiswa kwehupenyukusvika papuratifomu, iyo, pakupedzisira, inoshandiswa kuitenga.
Kunetseka uku kunoratidzira chii chinoenderera mberi apo SEO inoshandiswa mukati mushure mekupedzwayeprojekti. Kubatanidza SEO kubva pakutanga kunoderedza mari yekugadzirisa nyaya uye kunowedzera kushandiswa kwemapiritsi.
Kubva kuShoko Rokuedzwa
Kubudirira kwekushanda, SEO inofanira kuve yakabatanidzwa mune imwe nhanho kubva pakurongwapakutanga kweprojekiti yekuita uye kuongorora pakupedzisira. Nzira iyi inofanira kuziviswa nemashoko ekutsvakurudza nekuongorora, pejimazita, taxonomy, uye kufamba. Kudzika kwakadzika kwezvigadziriswe uye bhodhi hunofanira kurayira pakuvandudza, kugadzirwa, uye kusarudzwa kwemasarudzo.
Chimwe nechimwe chezvinhu izvi zvinogona kuwedzera kushanda kwe SEO kana kukuvadza.
Kubatanidzwa kwe SEO mumagetsi ekugadzirwa kwe e-commerce inokurudziraoptimal SEO kukosha pane zvishoma.
Silos ndiwo mavanga evanhu vanobatanidzwa sezvo vachiita kuti zviomeSEO nyanzvi kuongorora kuwirirana kwepurogiramu uye dzinoshandisa mari inogadzirwa kubva kuhupenyu hwekutsvaga hunoenderana ne-e-commerce.
Sarudza Mutoro, Access
Kana uchida kuisa pfungwa pane zvinoitwa nekutsvaga kwehupenyu, iwe unodamumwe munhu akazvipira kune SEO iyo inotarisana nezvose zvinoshambadzira, e-commerce, uye mabasa edijiti musangano. Kushandisa aSangano reSeO remukati ndiyo nzira inonyanya kushanda yekuvimbisa kuti SEO inova chikamu chinokosha chekambani yako.